#Maxaa ka jira wararka sheegaya in Bangiga Dhaxe ee Soomaaliya Qof Ajinabi ah Madax looga dhigayo? - Get Latest News From Horn of Africa
#Maxaa ka jira wararka sheegaya in Bangiga Dhaxe ee Soomaaliya Qof Ajinabi ah Madax looga dhigayo?
Waxaa si weyn loo hadal haya warar sheegay in Bangiga dhaxe ee Soomaaliya Ruux ajanabi ah Madax looga dhigayo ayadoo sida ay wararka sheegayaan ay qorshahaas wado Xukuumada Soomaaliya.
Qorshaha ay Xukuumada qof ajinabi ah Madax uga dhigeyso Bangiga dhaxe ee Soomaaliya ayaa soo shaac baxay kadib markii ay ka digeen Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Xukuumada Soomaaliya damacsan tahay in ruux ajnabi ah Madax uga dhigto Bangiga Dhaxe ee Soomaaliya, waxaana qorshahan hada kasii digaya Xildhibaano katirsan golaha shacabka.
Sida wararka qaar ay sheegayaan, soo jeedin wax looga badalayo sharciga Bangiga dhaxe si ruux ajnabi ah madax looga dhigo ayaa la filayaa la hor-geeyo Kulanka ugu horeeya ay yeelanayaan Xildhibaanada golaha shacabka maalinta Isniinta ah oo ku beegan 14 bisha kowaad ee sanadaka 2019.
Waxaa ka mid ah Xildhbaanada ka digay qorshaha wax ka badelka lagu sameenayo sharciga Bangiga Dhaxe si qof ajinabi ah madax looga dhigo, Mahad Maxamed Salaad oo katirsan Xildhibaanada golaha shacabka Baarlamaanka Soomaaliya.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sidatan u qornaa:-
BEEC GEYNTA BANGIGA DHAXE waa mashruuc bilowgiisa aan aragno lkn dhamaadkiisa cidi aysan ogeyn!
Soo jeedin wax looga badalayo Sharciga Bangiga Dhexe ayaa la horkeenayaa Golaha Shacabka maalinta Isniinta ah si nin AJNABI ah loogu dhiibo Bangiga Dhaxe.
Sharciga Bangiga Dhaxe ee wax ka badalka lagu samaynayo ayaa xeerinaya in Guddoomiyaha, Guddoomiye Ku Xigeenka, iyo 5ta xubnood kale ee Golaha Agaasimayaasha (Board of Directors) ay ahaadaan muwaadiniin Soomaaliyeed.
Haddaba, waxaa isweydiin mudan:
Maxaa xikmad ah oo kujira in xiligaan shuruucda dalka loo badalo nin AJNABI ah si loogu dhiibo Bankiga Dhaxe oo ah hay’adda ugu saraysa ee maamusha dhaqaalaha dalka?
Maxaa looga cararayaa muwaadinka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka wadaniga ah, laguna doortay nin AJNABI ah oo cilmi maaliyadeed aan baran. Shaqo maaliyadeedna aan soo qaban sida CV-giisa ka muuqata?
Mise waxaa jira qorsheyaal kale oo naga qarsoon oo in aan ogaanana hada aysan muhiim ahayn?!
Xildhibaanada golaha shacabka ayaa hadii wax ka badal ku sameeyaan sharciga Bangiga Dhaxe waxa ay meesh ka saareesaa sharcigii hore u diidayay in Bangiga Dhaxe ee Soomaaliya madax ka noqdaan dad ajaanib ah.